Fiaran-Dalamby Sy Fiara Fitateram-Bahoaka Tao Eoropa | Save A Train
an-trano > Travel Europe > Fiaran-Dalamby Sy Fiara Fitateram-Bahoaka Tao Eoropa
Tao anatin'ny ora vitsy monja, dia afaka ho mamantatra maro mamirapiratra sy sparkly firenena vaovao. fa, Inona no fomba tsara indrindra mba ahatongavana any. Nampiofana oharina Bus in Eoropa rehefa mizotra?
Haingana kokoa sy tsara kokoa mijery!
fiarandalamby, Tsy toy ny fiara fitateram-bahoaka, nandeha mahitsy ny alalan 'ny ambanivohitra. Izany dia midika fa raha tokony ho nandinika ny mankaleo lalambe, na ny fandaniana ora maro fotsiny nifindra tany amin'ny toerana, manana ny fahafahana jereo bebe kokoa ny firenena voafidy. Rehefa vonona ny hifindra any amin'ny toerana halehanao manaraka ianao, dia ho tonga any amin'ny tsy misy fotoana. Haingam-pandeha Nampiofana oharina Bus any Eoropa. Izy io dia no-brainer.
Ny 'Tsy fifamoivoizana', tsy midika hoe 'tsy misy mamy mitempo'. Tsy hoe tsy fitohanan'ny fiara. Izany no zava-misy momba ny lalamby - tsy misy manakana ny lalana. Izy ireo tsipika mahitsy zo ny toerana halehany.
Bus seza dia denser noho ny fiaran-dalamby seza
Ny fampiononana ny Train oharina Bus
Raha ny resaka mandeha lamasinina mifanohitra amin'ny bus. Fampiononana no mpanjaka. Rehefa nanapa-kevitra eo Train Bus oharina amin'ny any Eoropa, Lamasinina mandresy tsy teny an-dalana, fa in-eo, KOA! Amin'ny gara, ianao dia afaka miandry ny lamasinina amin'ny fampaherezana sy fiarovana, amin'ny toerana be ny hiara-mipetraka, mihinana sy misotro na mividy vatsy ho amin'ny alehanareo.
On ny Bus, ianao hizara ny toerana kelikely kokoa (ary ny kely fidiovana!) amin'ny mpandeha hafa. Dia tsy ho tratry ny ananany, ka haninjitra ny tongotra, na mifindra any amin'ny kalesy mangina, SY dia mety tsy ho-kanina na zava-pisotro misy.
Fiaran-dalamby seza mampahazo aina kokoa noho ny fiara fitateram-bahoaka seza
Ny maha-mora ny fiaran-dalamby sy bus
On a Train diany, fanambarana dia hanome antsipiriany ka-to-daty vaovao eo amin'ny fiaran-dalamby, avy rehefa mamela ny amin'izay mijanona sy izay miainga avy amin'ny sehatra izany, ary raha te-hampitaha lamasinina oharina amin'ny fiara fitateram-bahoaka tao amin'ny manovaova, Avy eo amin'ny fiaran-dalamby, fantatrao in 90% araka ny marina rehefa ho tonga.
Ny fiara fitateram-bahoaka dia hahazo anao amin'ny A ho B, fa raha te-handeha intsony, dia hihazakazaka ho lafo vidy ny olana. Ampoizina mihitsy fahatarana vokatry ny fifamoivoizana eo amin'ny lalana mety hidika hoe tsy ampy ny fifandraisana, niaritra anareo be dia be kokoa.
Ao amin'ny fiaran-dalamby, manana malefaka tanteraka ianao; miala fotsiny, ka hitsambikina amin'ny handefasana manofana mba hifanaraka ny drafitra.
Tsy maninona raha manina ny fiaran-dalamby - dia afaka mitsambikina fotsiny ny manaraka!
Resy lahatra ve ianao ao amin'ny Nampiofana oharina Bus any Eoropa mbola miady hevitra?
Mitohy, boky ny lamasinina dia niaraka tamin'ny Save A Train. Miaraka amin'ny habaka marobe eo ambonin'ny fiaran-dalamby, dia hanana toerana mipetraka indray, miala sasatra sy mankafy ny maha-raha manomana ny hetsika manaraka.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-versus-bus%2F%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#bustravel	Bus	europetravel	longtrainjourneys	Train Station	fiaran-dalamby soso-kevitra	Train Travel	TrainVSBus	traveltips